🥇 ▷ WSJ: macruufka 7 wuxuu lahaan doonaa Muuqaal cusub, Waxqabadyo cusub oo la Wadaago iyo Qaybinta Muusikada ✅
WSJ: macruufka 7 wuxuu lahaan doonaa Muuqaal cusub, Waxqabadyo cusub oo la Wadaago iyo Qaybinta Muusikada
Munaasabadda sanadlaha ah ee dhaqanka ee Apple, WWDC, waxaa lagu qaban doonaa maanta 7da fiidnimo xarunta Moscone Center ee San Francisco waxayna caanka ah Wall Street Journal ay ka faa iideysataa fursad ay ku shaaciso waxa bulshada Cupertino ay ku dhawaaqi doonto.
Sannadkan, the WSJ soo sheeg in Apple nooca cusub ee macruufka, oo ka madax bannaan astaamaha Sifoom iyo nashqadeynta guryaha, wax faallo ka bixinayay dhowr bilood. Waxa intaa u dheer, waxay sidoo kale sheegeen in, nidaamka hawlgalka wuxuu sidoo kale lahaan doonaa “habab cusub” oo lagula wadaago sawirrada iyo fiidiyowyada kale ee iPhone, waxayna yeelan doonaan adeegga xanta ah ee iRadio.
Isbedelkani wuxuu in badan sugaayay, ka dib markii ay walaac ka muujiyeen shaqaalaha Apple arrinta ku saabsan nidaamka hawlgalka mobilada iyo xaqiiqda in aan la cusboonaysiin. Markii hore, qaabeynta ku saleysan “skeuomorphism” waxaa loo sameeyay inay ka caawiso dadka inay fahmaan sida loo isticmaalo iPhone-ka si fudud, 6 sano ka dib walaacani ma ahan mid aan qarsoonayn sidaas darteed waxay u badan tahay in maanta wax walboo ay isbedelaan nooca cusub.
WSJ: «Apple Waxay ku mashquulsan tahay fikirka ah inaysan lahayn fikradaha hal abuur leh»
Marka lagu daro macruufka 7, WSJ wuxuu sheegayaa waxyaabo kale oo WWDC 2013 laga yaabo ama aysan diirada saari karin:
Kumbuyuutarro cusub iyo nooca OS X cusub ayaa la filayaa inay yimaadaan.
Fikradda ah soo bandhigida telefishan kama mid aha qorshaha shirkadda.
Sida muuqata Khariidadaha iyo Siri ma heli doonaan cusboonaysiin weyn, in kasta oo ka soo horjeedda la filayo.
Sida muuqata, sida wargeysku leeyahay, Apple She hadda waxay ku mashquulsan tahay fikirka ah inaysan haysan fikrado hal abuur leh waxayna rajeynayaan taas, iyadoo uu Jony Ive gacanta ku hayo iOS, tan. WWDC 2013 Gabi ahaanba way cadeyn karaan hadii kale.